चितवनका ५ पालिकाको कांग्रेस महाधिवेशनको मत परिणाम सार्वजनिक, २ वटामा निर्वाचन हुँदै – Nepaliko Aawaj
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १०, २०७८ | १२:०१:२३
चितवन । नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन अन्र्तगत चितवनको शनिवारदेखि सुरु भएको चितवनको नगर अधिवेशनमा अन्र्तगत ७ मध्ये ५ पालिकाकोे नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी २ वटा पालिका भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाको भने निर्वाचन प्रक्रिया आज (आईतबार) रहेको छ ।
निर्वाचनको नतिजा अनुसार इच्छाकामना गाउँ कार्यसमितिको सभापतिमा कृतिकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । उनले आफ्नो निकटतम प्रतिद्धन्दी विष्णुकुमार कुँवरलाई ४ मतले पराजित गरेका हुन् । त्यस्तै माडी नगर सभापतिमा कोमलनाथ भुषाल बिजयी भएका छन् ।
भुषालले आफ्ना निकटतम प्रतिद्धन्दी खेम महतोलाई ३ मतले पराजित गरका हुन् । माडीमा १४८ मत खसेको मध्ये ७४ मत भुषालले प्राप्त गरेका छन् भने खेम महतोले ७१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उता राप्ती नगर सभापतिमा भने देबेन्द्र लामा विजयी भएका छन् । उनले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नारायण उप्रेतीलाई ४० मतको मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । लामाले १२७ मत प्राप्त गर्दा उप्रेतीले ८७ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनमा लामाको पुरै प्यानल नै विजयी भएका हो ।
त्यस्तै कालिका नगरपालिकाको सभापतिमा दिपेश्वर के.सी. बिजयी भएका छन । के.सी. ले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लिलाबहादुर गुरुङलाई १० मतले पछाडी पार्दै बिजयी बने । कुल खसेको मत मध्ये के.सीले ११२ मत प्राप्त गरे भने लिलाबहादुर गुरुङले १०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उता खैरहनी नगरपालिकामा भने गुणराज श्रेष्ठ बिजयी भएका छन् । उनले आफ्ना निकटतम् प्रतिद्धन्द्धी शशी खनियालाई ३ मतले पराजित गरेका छन् । कुल खसेको मत मध्ये श्रेष्ठले १४५ मत प्राप्त गरे भने खनियाले १४२ मत प्राप्त गरे ।